Leica C-Lux, zoom super compact cusub oo leh naqshad qurux badan iyo 1-inji shidma | Wararka Gadget
Ruben gallardo | | Sawir
Waa run in suuqa kamaradaha is haysta ay si xoog leh u garaaceen taleefannada casriga ah. Waa run inay boos yar ka qaataan jeebkeena, shandada ama boorsada. Si kastaba ha noqotee, inaad laba qaado qalabka kor ku xusan waa wax aanu qof walba diyaar u ahayn. Natiijada? Waxaan ku qaataa "hal mid" iyo voila; taasi waa in la yiraahdo: mobilada caqliga badan.
Taasi waxay tiri, waxaa jira shirkado sii wadaya inay sharad ku yeeshaan moodooyinka is haysta laakiin taasi waxay bixisaa intaas marka lagu daro moobiil aad u qiimo badan premium wax kastoo, ma bixin karo. Waxa ugu dambeeya ee imanaya waa Leica C Lux, kamarad naqshad wanaagsan leh - sida waxkasta oo Leica ay bixiso - iyo sidoo kale sifooyin aad u wanaagsan si ay u noqdaan wehel aamin ah meel kasta oo aad tagtid.
Waxaad ka heli kartaa Leica C-Lux laba midab oo kala duwan: dahab ama buluug. Dhanka kale, iyo sidii aan soo sheegnayba, waxay leedahay naqshad isku dhafan, in kastoo tan macnaheedu ahayn inay bixiso natiijooyin wanaagsan. Si aad u bilowdo, Dareemaheeda waa 1 inji; taasi waa, gabalka keega waxaa lagu murmi doonaa moodooyinka tartamaya sida Sony ama Panasonic. Sidoo kale, ka xalinta ugu badan ee aad kuqaban karto sawirada waa 20 megapixels.
Sidoo kale, Leica C-Lux-kani wuxuu ku darayaa dhaweyn illaa 15 koror; waxay bixisaa flash-ku-dhisan; shaashadeeda dambe waa 3 inji iyo taabasho badan; marka lagu daro bixinta a Muuqaalka LCD oo leh ilaa 2,3 milyan oo dhibco xallin ah. Maxaan kaloo ka dhihi karnaa? Hagaag, qaybta iskuxirka waxaan lahaan doonnaa Bluetooth iyo WiFi, wax la caan baxay mobilada iyo kiniiniyada waa ku dhowaad is dhexgal qasab ah.
Sida qaybta fiidiyowga ee Leica C-Lux, haddii shirkaddu rabto in qaabkeedu yeesho suurtagal, ma iska indha tiri karto xalka ugu caansan xilligan: sida saxda ah, tan waxaa laga yaabaa 4k clips. Ugu dambeyntiina, waxaan kuu sheegayaa in qiimaheeda uusan raqiis noqon doonin: waxa la iibin doonaa bisha soo socota ee Luulyo oo dukaamada lagu dhufto qiimaha 1.050 Dollar.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Sawir iyo dhawaq » Sawir » Leica C-Lux, zoom super compact cusub leh naqshad qurux badan iyo 1-inji shidma
Galaxy Note 9 wuxuu suuqa ku dhufan doonaa 512 GB oo keyd ah
Ku guuleysta mid ka mid ah Rowenta Smart Force Aasaasiga ah ee aan toddobaadkan xodxodaneyno!